नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन ‘लाइडार सर्वे’ सुरु,कस्ताे विधि हो यो? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन ‘लाइडार सर्वे’ सुरु,कस्ताे विधि हो यो?
काठमाडौं । नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन नापी विभागले ‘लाइडार सर्वे’ सुरु गरेको छ। विकास निर्माणलगायत ठूलो क्षेत्रमा टेवा पुग्ने यो सर्वेलाई नापीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा गत वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो। हवाईजहाज उडाएर गरिने उक्त सर्वेको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि मङ्सिरदेखि मात्र जहाज उडाइने छ। पहिलो चरणमा २० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्वे गरिनेछ। यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट चितवनसम्मको तराईको भूभागमा सर्वे गरिने छ । यसका लागि १५ महिनाको समय तोकिएको छ ।पहिलो चरणको काम सकिएपछि थप क्षेत्रको सर्वे गरिने छ । नेपालभरको लाइडार सर्वेका लागि सात वर्ष लाग्ने छ । नेपाल सरकारको बजेटबाट सुरु गरिएको यो सर्वेका लागि आगामी वर्ष थप सर्वे गर्न जापान सरकारसँग सहयोग मागिएको प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए।
यो सर्वेमा हवाईजहाजबाट उचाइको विवरण सङ्कलन गर्ने र ‘हाई रिजोलुसन फोटो’ खिच्ने काम एकै पटक हुन्छ। आवश्यक प्रविधि नेपालमा नभएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श सेवा प्रदायकसँग सेवा लिएर काम अगाडि बढाइएको हो। पृथ्वीको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन लाइडार सर्वे गरिन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले थपे, “यो प्रविधिले धरातलीय स्वरूप ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ । कहाँ अग्लो छ, कहाँ होचो छ, कहाँको जमिनको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको मापन गर्ने अत्याधुनिक विधि हो लाइडार सर्वे। ”
एडीलेडमा नयाँ संविधानको भव्य स्वागत
अष्ट्रेलिया, मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा एडीलेडमा नेपाली समूदायमा खुसियाली छाएको छ । साउथ […]
पुटिनको तस्वीर भएको टिसर्ट लगाएपछि…
एजेन्सी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको तस्वीर भएको टिसर्ट लगाएपछि एक फुटबलरलाई निकै तनाव भएको छ […]
यस कारणले गर्दा अझै वर्षा र बदली हुने, आत्तिन पर्ने अवस्था भने नअाउने
भदौ १२, काठमाडौँ । विगत केहि दिनमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा भारी तथा सामान्य वर्षा भए । पुर्वमा भारी […]